ဒုက္ခသည်များနှင့်အခြားအသစ်ရောက်ရှိလာသောကူညီရန်အရေးယူ | USAHello
ကျွန်ုပ်တို့၏စေတနာ့ဝန်ထမ်းအများစုအဝေးမှအလုပ်မလုပ်. စေတနာ့ဝန်ထမ်းကြှနျုပျတို့၏အကွောငျးအရာကိုတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်ကြီးမားတဲ့အခန်းကဏ္ဍ, ကျွန်ုပ်တို့၏အရင်းအမြစ်များကိုဘာသာပြန်ဆိုကူညီပေးနေ, နှင့် USAHello အကြောင်းကိုနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုပြန့်ပွား. လုပ်အားပေးဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ.
သငျသညျအောင်မြင်သောပေါင်းစည်းမှုများအတွက်အရေးအပါဆုံးအရာတစျခုပေးကူညီခြင်းဖြင့်ဒုက္ခသည်တစ်ဦး၏အသက်တာ၌တစ်ဦးခြားနားချက်စေရန်အရေးယူနိုင်ပါတယ်: ကောင်းသောသတင်းအချက်အလက်ရယူသုံးစွဲနိုင်. ယခုလှူဒါန်းမှု Make.
သင်သည်သင်၏အသိုင်းအဝိုင်းထဲကဖြစ်သည့်အခါကြိုဆိုတဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုဝတ်ဆင်! ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်္ကျီတွေထဲက Buy. အဆိုပါအင်္ကျီတစ် Message ပေးပို့, တိုက်ရိုက်ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရန်: “ကြိုဆိုပါတယ်. ဒါဟာသင့်ရဲ့မူလနေရာဖြစ်သည်, များလွန်း။” အဆိုပါအင်္ကျီရှစ်ဘာသာစကားများရရှိနိုင်ပါသည်. ယခုတစ်ရှပ်အင်္ကျီကိုဝယ် – ရရှိသောကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုထောကျပံ့.
ကြှနျုပျတို့၏ website အကြောင်းကိုမသိစေခြင်းငှါ, အဘယ်သူသည်သင့်ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့ website ကိုမျှဝေပေးရန်အရေးယူ. သငျသညျဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ usahello.org အကြောင်းကိုသိကြစေရန်သင့်ဒေသခံရပ်ရွာထဲတွင်ဖြန့်ဝေဖို့အဝေးရောက်ပစ္စည်းများတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်. ယခုတောင်းဆိုမှုပစ္စည်းများ.
သငျသညျဒုက္ခသည်များကြိုဆိုပါတယ်ကူညီရန်ရှစ်အကြံပေးချက်များ. သင်သည်သင်၏အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူနှင့်တိုက်ရိုက်လုပ်အားပေးနိုင်ပါတယ်, သို့မဟုတ်သင်နေဆဲဘို့ထောက်ခံနှင့်တိုက်ရိုက်ဝန်ဆောင်မှုအလုပ်မပါဘဲဒုက္ခသည်များထောကျပံ့နိုငျ.
တကယ်ကိုလှုံဆော်အားပေးဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူအကြောင်းကို Read. ပိုပြီးအောင်မြင်တဲ့ပေါင်းစည်းမှုအတွေ့အကြုံများရှိသည်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူမျှဝေအကြံပေးချက်များ. ယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုဖတ်ပါ.
Help refugees and immigrants in the USA
USAHello မှလှူဒါန်းခဲ့ခြင်းအားဖြင့်, you support the technology and education that help newcomers succeed in the USA.